Isayensi | TeraNews.net |
I-Nikon CFexpress Type B 660 GB ye-Z9
I-AV-receiver Marantz SR8015, uhlolojikelele, imininingwane
Ukunikezwa okuthakazelisayo okuvela ku-Oclean ngomhla ka-11.11.2021
Izazi zezinkanyezi ezivela emazwenikazi amaningana ngasikhathi sinye zakhuluma ngokuvumelana nenkolelo-mbono yokuba khona kweplanethi yesibili efana noMhlaba. Ngokuvumelana ne…
I-Tonometer OMRON M2 Basic - umsizi wezokwelapha ongcono kakhulu
Imakethe ye-tonometer icebile ekunikezeni. Futhi umthengi ulahlekile ku-assortment enikezwa inqwaba yabakhiqizi abavela kokuhlukile ...
Izifudumezi zikagesi - ezingcono nokuthi kungani
Njengoba amaqhawe ochungechunge olulodwa asho - "Ubusika buyeza." Futhi ungaphikisana ngesilinganiso sokufudumala kwembulunga yonke ngokungapheli. Kunoma iyiphi…
Ukwelashwa kwe-Achedaway Smart Cupping - ukhohlwa ngokubhaka okujwayelekile
Ukwelashwa ngamabhange ezokwelapha (i-cupping therapy) kwaziwa isintu isikhathi esingaphezu kwenkulungwane yeminyaka. Ezincwadini zemithi, esigabeni ...
I-akhawunti ye-Perseverance rover ithola ukuthandwa ku-TWITTER
I-NASA inikeze abantu ithuba lokuthi babuke iplanethi ebomvu ngokusebenzisa i-lens ye-Perseverance rover. WaseMelika ...
Abenzi bamawashi namasongo ahlakaniphile bangafakazela ukusebenza kwama-oximeter wokushaya ngamandla kumagajethi abo ngokuthanda kwabo. Kepha lokhu ...
Inyanga enkulu (inyanga enhle kakhulu) yinto yemvelo eyenzeka ngesikhathi sokusondela kakhulu kweplanethi enguMhlaba kwiNyanga ye-satellite. ...
Ezindaweni zomphakathi, lapho uvakashela isitolo, igalaji likaphethiloli noma indawo yezokwelapha, ungathola izinto eziningi eziwusizo. Futhi ngo ...
Uyayikhumbula le nkulumo ethi "Inkawu isizophuma esikhwameni"? Kumenyezelwe ngu-Elon Musk e2019 maqondana nokuqaliswa kwe ...
Ifilimu ethi I am Legend - isenzo senzeka ngamuphi unyaka
Isihloko esishisayo ekuxhumaneni nomphakathi ekuqaleni kuka-2021 umuthi wokugoma we-COVID nemiphumela yawo. Ababhali bokuthunyelwe bathumela izithombe ku ...
Isibonakude esisezingeni lokungena esitholakalayo singatholakala emashalofini esitolo se-inthanethi. Ilensi enkulu nomfanekiso ocacile we-crystal ...
Ibhulashi lamazinyo kagesi liwumkhiqizo wokunakekelwa ngomlomo ozoncintisana kalula namabhulashi avamile. Konke…
Isibani esihlakaniphile seDifeisi - ikusasa selifikile
Amadola ayi-10 kuphela ase-US nokusebenza okunjalo kwe-chic okunikezwa yisibani esihlakaniphile se-Difeisi. Ukunakwa - isibani sikagesi (1 ...
Ukuqhekeka emalungeni: ngenxa yalokho futhi kuyingozi
Umsindo wokuqhekeka wesici ngesikhathi sokunyakaza noma kokusebenza njalo kubangela ukwesaba kubantu. Ukudilika emajoyintini kusikisela ngokungenhloso ...
Ngabe i-air conditioner ithatha amandla angakanani?
Abathandi bokushayela ezingxenyeni ezivulekile zethrekhi bahlala bekhala ngezimoto zabo. Njengokuthi, ne-air conditioner ivuliwe, amandla emoto ...